WST-001-2-11- को आउटडोर किचन बगैचा बाआमाले नयाँ डिजाइन गरिएको स्टेनलेस स्टील इस्कूल बीबीक्यू ग्यास ग्रिजलाई फ्रिजरको साथ | Zhongshan Well Sure Metal Product Co., Ltd
Spot विपत्ति / spit रोलिससी
ग्यास ग्रिडल / टेप्न्याकीका
काठ प्याला ग्रिल
West-001-5-1-11 शीर्ष बिक्री आउटडोर किचेम नि: शुल्क स्ट्यान्डिंग स्टील वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक निवारण
West-CF2 आउटडोर किचेन कम प्रतिरोध अनुकूलन अनुपातिक आकारको स्ट्राइज इस्पेंस बीबीक्यू आउटडोर किचन भण्डारण फ्रिज फ्रिज
West-001-2-11-1 चीन निर्माता कस्टम कस्टम अनुकूलन स्टेनलेस स्टिल कोरियाली कोरियाली किरान बार्बेकु ग्यास ग्यास गम्भीर
West-001-21-1- s कस्टम आउटडोर किचन बगैचा पलबेक्यूको नयाँ डिजाइन गरिएको स्टेनलेस स्टील इस्कूल बीबीक्यू ग्यास फ्रिजरको साथ
WST-001-2-11- को आउटडोर किचन बगैचा बाआमाले नयाँ डिजाइन गरिएको स्टेनलेस स्टील इस्कूल बीबीक्यू ग्यास ग्रिजलाई फ्रिजरको साथ
1.6 बर्नरहरू, 1 साइड बर्नर, थप 1 इन्फ्रार्ड फिर्ता बर्नर
कुल 90000btu पकाउने पावरले ग्रिल, धुम्रपान, चश्मा, ब्ल्याक, एकै साथ बेक्छ, र तातो र रमिटर स्वाद प्राप्त गर्दछ
2.heavy कर्तव्य पूर्ण स्टेनलेस डबल-तह ढेर तातोको लागि
निर्मित-मा थर्मामीटरले सही ग्रिलिंग जोनको तापमान मापन सुनिश्चित गर्दछ
Anown। पक्ष बर्नर
थप प्रोप र कार्य ठाउँ प्रदान गर्दछ
B.Blue-LIZERT CHORS GOOBS र आन्तरिक हलोगन बत्तीहरू
तपाईं अँध्यारो रातमा पनि बारबेक्यूको मजा लिन सक्नुहुन्छ
स्टेनलेस स्टील ढोकाको साथ .ckintets
BBQ उपकरणहरू र licquided ग्यास बोतल भण्डारण गर्नका लागि
खाना पकाउने क्षेत्र 960* 455555mm
तापती आउटपुट 90000btu / 30.5kw
ज्वलन पाईजो इजेप्टेन
मोटर आउटपुट 4w (220-240V, ACH50HZ), 2.4or3r / मिनेट
निर्माण स्टेनलेस स्टील र ग्रेनाइट
गर्ने काम निर्मित-इन ग्रिल 2..7 किलो, साइड बर्नर 6.9kw
रिफ्रिजरेटर 68L, 220-2400 क्ली / 50HZ,
भौतिक # 304/430 स्टेनलेस स्टील
विशेषता सजिलै भेला, सजिलै सफा गरियो
दरखास्त बगैचा / पार्टी / आउटडोर
सुरक्षा उपकरण ज्वाला सुरक्षा उपकरण
समाप्त सम्द्यातिकक्ति प्रक्रिया
समारोह BBQ, स्टेक निर्माता, कुखुराको भुई
ताप 350 ℃
विन्डो अवलोकन गर्दै स्वभाव गिलास
रोटस्सीले सेट रोटस्सीले रोड, रोटस्सी प्रो :: रोकिजर मोटर
पकाउने ग्रिडहरू Mm मिमी स्टेनलेस स्टील, 3PC
चुरोट ट्रे 2PCs, स्टेनलेस स्टील
गर्मी नियन्त्रण 1 180 ° नियन्त्रणको साथ भल्भहरू
बत्ती निर्मित हाल्गन प्रकाश 2PC 2PCs र नेतृत्व नगरी बत्ती 6PC
मन्त्रीमण्डल2ड्रयरहरू र setter पहुँच ढोका
बिरालाहरू 12 एपसीएस
◪ एक्टिलल प्रोबेक ग्रिल / ग्यास ग्रिल / पिज्जा ओभन / चारकोल गिलिंग्स / अफसेट्स धूम्रपान गर्न / फायर पिट्स र बीबीक्युट सामानहरू।
◪ हामी दुबै OEM आपूर्ति गर्दछौं& ODM सेवाहरू, -7- .. नमूनाहरूको नेतृत्वको समयका लागि कार्य दिनहरू।
◪हामीसँग उत्तम गुण व्यवस्थापन प्रणाली छ। हामी विनियोजित सिफारिस उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्छौं& राम्रो मार्केटिंग रणनीति।
◪ हामीसँग En1860-10-1, CS, LFGB सहितको पूर्ण मर्ड प्रमाणपत्र छ।
◪ हामी पछि-बिक्री र अनलाइन सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छौं, र तपाईंको अनुरोध पूरा गर्न बजेट मूल्य प्रदान गर्न सक्दछौं।
1 तपाई कुन उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी व्यावसायिक बार्बेक्यू ग्रिल, निर्मित ग्रिल, ग्यास ग्रिल, कोइला ग्रिल, आउटडोर ग्रिल, पिज्जा र स्टक निर्माता, spit घुमाइ र यस्तै।
2 के तपाईं नमूनाहरू वा रेखाचित्रहरूको अनुसार उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी तपाईंको नमूना वा प्राविधिक रेखाचित्रहरूको अनुसार उत्पादन गर्न सक्छौं। हामीसँग आर छ&DBQ क्षेत्र मा 10 बर्षको अनुभव।
3 तपाईंको भुक्तानी को सर्तहरू के हो?
सामान्यतया, हामी T / t स्वीकार्यौं, अपरिवर्तनीय l / c दृष्टिमा। नियमित अर्डरको लागि, हामी P.O.O.O. को साथ T-T0% जम्मा गर्दछौं।, शिपमेन्ट अघि भुक्तान गर्न
4 नमूना र उत्पादनको लागि तपाईंको अग्रसर समय के हो?
नमूनाको लागि, यसले सामान्यतया -15-1-15 दिन लिन्छ। उत्पादन आदेशको लागि, यसले नमूना पुष्टि पछि -0-4545 दिनहरू लिन्छ र तपाईंको अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्दै। विशिष्ट डेलिभरी समय आईटमहरूमा निर्भर गर्दछ र तपाईंको अर्डरको मात्रा।
। तपाईंको उत्पादनहरूको सामान्य प्याकिंग के हो?
हामी सामान्यतया मानक नालीजेट गरिएको कार्टन बक्स र काठको बक्सको साथ उत्पादनहरू प्याक गर्छौं। हामी ग्राहकको माग अनुसार बाटोमा पनि प्याक गर्न सक्छौं।
। तपाईंको डेलिभरीको सर्तहरू के हो?
हामी EXW, FOB, Cif, आदि स्वीकार गर्दछौं जुन तपाईं एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको लागि सबैभन्दा सुविधाजनक वा लागत प्रभावकारी छ।
। तपाईंको उत्पादनहरूको जीवनकाल कति लामो छ?
Years बर्ष यदि उत्पादनहरू सही तरीकाले प्रयोग गर्दैछ र राम्रोसँग भण्डार गर्छन्।
Your। तपाईको उत्पादनहरूको ग्यारेन्टी कति लामो छ? के हुन्छ यदि त्यहाँ कुनै पनि भागहरू छन् भने?
हाम्रो वारेन्टी एक वर्ष हो। वारेन्टी भित्र, भाँचिएको भागहरू स्वतन्त्र रूपमा बदल्न सकिन्छ।
9 म कहिले मूल्य पाउन सक्छु?
तपाईंको निर्दिष्ट जाँच गरे पछि2hours घण्टा भित्र। यदि तपाईं जरुरी हुनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस् वा ट्रेड नेकरमा सन्देश पठाउनुहोस्, ताकि हामी तपाईंलाई समयमा जवाफ दिन सक्छौं।
10. तपाईंको गुण जाँच गर्न म कसरी नमूना प्राप्त गर्न सक्छु?
मूल्य पुष्टिकरण पछि, तपाइँ नमूनाहरूको लागि आवश्यक छ हाम्रो गुण जाँच गर्न। यदि तपाईंलाई तपाईंको लोगो, डिजाइन, आदिको साथ नमूनाहरू चाहिन्छ भने, कृपया हामीलाई यी विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्, त्यसैले हामी तपाईंलाई नमूना शुल्क प्रदान गर्दछौं। सामान्यतया नमूना शुल्कहरू थोक मूल्यको मूल्यमा डबल हुन्छ। नमूनाको फिर्ती थोक अर्डर मात्रामा निर्भर गर्दछ। अर्डर मात्राले नमूना शुल्क सबै फिर्ताको लागि सबै फिर्ता वा आधा फिर्ता छ भनेर निर्णय गर्दछ।